TOMATO "MOMMY BIG": SHARAXAAD IYO ASTAAMO KALA DUWAN, TALOOYIN KU SAABSAN DARYEELKA IYO BEERISTA, IYO SIDOO KALE QALABKA SAWIRADA - BEER CAGAARAN
Kala duwan goor hore ee yaanyada-weynaha "Big Mom": sharaxaad ka mid ah astaamaha, talooyin ku saabsan sii kordhaya
"Mommy Big" waa noocyo kala duwan oo yaanyo ah, laakiin horeyba si fiican ayaa loo dhisay. Bannaanka u fiirso xajmiga midhaha iyo dhadhankiisa.
Waxyaabaha kala duwan waxaa laga soo saaray jajabiyeyaal ka yimid Ruushka Federaalka, asalkoodii - Gavrish LLC. Ka diiwaangashan Diiwaanka Gobolka ee Ruushka ee sii kordhaya ee hoyga filimada ee 2015.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sifooyinka kuwan yaanyada iyo ku saabsan sifooyinka ay beerashada, akhriso maqaalkeena. Waxay sidoo kale bixisaa sharaxaad buuxda ee kala duwan.
Big Mom Tomato: sharaxaad kala duwan
Warshadu waa mid go'aaminaysa - wuxuu leeyahay xaddidaadda koritaanka. Buundada ma ahan mid caadi ah, gaaban, illaa iyo 60 cm. Waxay leedahay stem xoog leh leh tiro yar oo caleemo ah, dhowr laamood, si siman oo ku yaal iyaga on miraha waaweyn. Caleemaha waa dhexdhexaad ah, "nooc baradho ah, cagaar iftiin ah, qoyan, oo aan lahayn pubescence.
Duufaanku waa mid sahlan, wuxuu sameeyaa 7 caleemood markii ugu horeysay, ka dibna la beddelo laba caleemo. Laga bilaabo hal maaddada inflorescence waxay noqon kartaa ilaa 6 miro. Miro dhir ah oo la mid ah wadajir ayaa qabta dalagyada si adag u xiran - midhaha ma dhicin. Warshadu waxay leedahay mid adag oo soo kordhay oo ballaadhan, oo siinaya dhammaan xaaladaha horumarinta fiican iyo dhalidda weyn.
Marka loo eego heerka daaqsinka, "Big Mommy" ayaa loo tixgeliyaa goor hore, miraha waxay bilaabaan inay daadiyaan maalinta 85aad ka dib markii ay beeri ku beeri lahaayeen, haddii ay si fiican u daryeelaan. Kala duwan tani waxay u adkaysato cudurada waaweyn ee yaanyada. (masaagada, xabuubka budada ah, cadad goor dambe). Kala duwanaanshaha waxaa loogu talagalay in lagu koro xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, gobollada qaarkood waa la oggol yahay in ay ku koraan dhul furan.
Cunno marka ay sii kordheyso xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo illaa 10kg halkii 1 sq.m. Goob furan - ka yar.
Breeders had iyo jeer ka taxaddaraan noocyada taranta leh sifooyin fiican. "Mommy Big" waxay leedahay sifooyinka soo socda:
ha is fiiqin;
Ka maqnaanshaha turjumaanka ee fasalkan lama helin.
Miro yar oo foosto yar leh ayaa leh qaab la isku qurxiyo oo leh ultra-dheer ("sanka"), wadnaha-qaabeeya.
Culaysku wuxuu u dhexeeyaa 200 ilaa 400 g, xaaladaha cimilada wanaagsan iyo daryeelka saxda ah ayaa noqon kara miraha waaweyn. Berrinka bannaan, dalaggu waa yar yahay.
Maqaarku waa mid adag, dhuuban, oo siman.
Midabka miro macquulkuna caadi ahaan waa cagaar, midabkuna waa casaan cad.
Miraha waa fareem, sonkor, leh dhadhan fiican.
Waa miro yar, waxay ku yaallaan 6-8 qolal yaryar.
Arrinta qalalan ayaa laga helaa celcelis ahaan.
Kaydinta waxay qaadataa waqti dheer, inta lagu jiro gaadiidka foomka ma luminayo.
Hayso dalagga yaanyada ee meel qallalan oo qoyan! Waxay ka kooban tahay qadar ballaadhan qotofene. Lycopene waa antioxidant oo mas'uul ka ah dib u soo kabashada jirka. Kala duwan ayaa leh midhaha dhabta ah ee casiir leh, qallajin qafiif ah macaan, joogitaanka dufanka yaanyo qaar ka mid ah. Waxay ka kooban tahay boqolkiiba siyaado nafaqada. Isticmaalka ugu wanaagsan ee isticmaalka - ee gobolka cusub, saladh cayriin, sanduuqyo.
Marka daaweynta kuleylku aysan dhumin dhadhamin, ku habboon ilaalinta jarida. Ku habboon soo saarida waxyaabaha yaanyo - baastada, suugada iyo casiirka.
Waxaad arki kartaa yaanyada "Big Mommy" ee sawirka:
Beerista suurtagalka ah ee kudhisan Federaalka Ruushka, ee beerista beerta furan laga saaray gobollada waqooyi. Sida kor ku xusan, waxaa fiican in la koro noocyada kala duwan ee gudaha. "Mommy Big" ayaa si dhakhso ah u kaco, habab saaxiibtinimo ah, sida miraha loo abuuro oo dhakhso u dhaqso.
Beeridda geedo sababtoo ah heerka hore ee Bisaylkiisa waxaa lagu fulin karaa dhammaadka March iyo horraantii Abriil. Seeds waxay u baahan tahay daaweyn leh xal jeermiska. Goobta qulqulatadu waxay qiyaastii 2 cm ka soo baxday dhismaha laba warqadood oo wanaagsan. Awoodaha soo-qaadista waa inay noqotaa qiyaastii 300 ml.
Waraabinta si ay u soo saarto iyada oo aan u oggolaanin biyaha inay ku dhacaan caleemaha. Dharka ugu sarreeya ee bacriminta macdanta. Dhowr maalmood ka hor daadi meel meel joogto ah, waxaad u baahan tahay inaad adkaato dhirta - furo caleenta daaqada dhowr saacadood ama samee geedo balakoonka. Bilowga May, waxaad ku beeri kartaa in lagu koriyo, ciidda waa in la kululeeyo iyo perekopana leh humus. Daaridda waxaa suurta gal ah in dhul furan toddobaadkii.
Waraabiyo aqalka dhirta lagu koriyo - hoosta xididka biyaha diiran. Ku quudi 10 maalmood oo kasta. Isku-uruurinta waxaa loo baahan yahay 2-dii toddobaadba, baadiyaha waxaa loo sameeyay 2-jir. Pysynki wax ka badan 4 cm lama saaro - waad dhaawici kartaa geedka. Garter waxaa loo baahan yahay trellis toosan maaddaama miisaanka midhaha.
Kala duwan ayaa leh difaac xooggan oo ah cudurrada badankood iyo cayayaanka.